Nhau - Natural Slate Serving Plate
Slate Plates Matafura seti ane maviri akasiyana mabhenefiti achienzaniswa neakajairwa seti:
Chekutanga, ivo vakasimba kwazvo pakurwisa zvikwambo uye chechipiri, zviri nyore kuvasunungura kubva kune ese mavara.
Slate plates haingofadzi chete neyakakura uye inoyevedza dhizaini, asiwo kuburikidza nekusiyana kwavo kwekushanda. Anogona kushandiswa sematafura ezvigadziro zvetafura, sekushandira mahwendefa emidziyo inokudzwa, semapiritsi kana semaruva coasters nezvimwe zvakawanda.
Kunyangwe seyekushongedza placemat pauri iwe yaunogona kuratidza yako yakanaka nzvimbo marongero kana kuhodha ndiro zvakananga, uine slate placemat iwe unozokwanisa kufadza munhu wese.
Uyewo kubva pakuona kwezvakatipoteredza, slate boards isarudzo yakanaka kwazvo, slate ibwe rechisikigo risingafaniri kugadzirwa sezvimwe zvinhu.
Ese hunhu uhwu hunoita kuti slate placemat igadzirwe kwete chete yekutarisa-chaiyo yekubata, asi inogona zvakare kukora mune ecological uye inoshanda nharo.
Mabhodhi akanaka akaitwa nemaoko echisireti chechisikigo anoratidza akasiyana siyana, achipa hwaro hwevhu hwechizi, charcuterie kana appetizers. Nyora zvakananga pamabhodhi echizi ane choko kuti unyore pane zvakasarudzwa; kungopukuta nemucheka wakanyorova. Felt backing inodzivirira matafura.
Rustic Style Slate Serving Board- 100% Handmade kubva Natural Stone Slate, yakanaka yakasikwa nzvimbo ichaita tafura yako yekudyira yakasarudzika. Nzira yakanaka yekushandira cheese, dessert uye appetizers. Yakakwana yekuvaraidza, kushumira, yekushongedza uye nezvimwe.
Yakagadzirwa neHigh Quality Natural Slate. Imwe neimwe slate board yakasarudzika ine chipped edges. Yakaputirwa mumafuta emamineral kuburitsa runako rwechisikigo!
Nekuda kwezvinhu zvakasikwa slate, haina kusimba uye inopinza zvinhu (mapanga, maforogo, nezvimwewo) zvinogona kukwenya pamusoro payo. KWETE microwave, dishwasher, oveni uye stovetop yakachengeteka. Kugeza maoko chete.
Nguva yekutumira: Jul-05-2021
Industrial Park, Lushan Guta, Jiujiang, Jiangxi, China